Ntuziaka nke Nmalite site na ntanetị aka na ibe weebụ
Data na ozi na weebụ na-eto eto kwa ụbọchị. N'oge a, ọtụtụ ndị na-eji Google eme ihe dị ka isi mmalite ihe ọmụma, ma ha na-achọ nyocha maka azụmahịa ma ọ bụ na-agbalị ịghọta ihe ọhụrụ.
Site na ọnụọgụ data dị na weebụ, ọ na-emepe ọtụtụ ohere maka ndị ọkà mmụta sayensị data. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ data na weebụ adịghị ngwa ngwa. A na-enye ya na usoro a na-emeghị emezi nke a na-akpọ dị ka HTML usoro a na-adịghị ebudata. Ya mere, ọ chọrọ ihe ọmụma na nka nke ọkà mmụta sayensị nwere ike iji ya mee ihe - bio baumwollstoffe grohandel.
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke na-agbanwe data dị na HTML usoro n'ime usoro a haziri ahazi nke nwere ike ịnweta ngwa ngwa ma jiri. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asụsụ niile nke mmemme nwere ike iji mee ihe maka ntanetị weebụ. Otú ọ dị, n'isiokwu a, anyị ga-eji asụsụ R.
E nwere ọtụtụ ụzọ a pụrụ isi wepu data site na weebụ. Ụfọdụ n'ime ndị a ma ama na-agụnye:
1. Nchịkọta mmadụ - Kpochapụ
Nke a bụ usoro ngwa ngwa ma dị irè iji wepụ data site na weebụ. N'iji nke a, mmadụ na-enyocha data ya onwe ya wee dezie ya na nchekwa nchekwa mpaghara
19) 2. Ederede ederede
Nke a bụ ụzọ ọzọ dị mfe ma dị ike iji wepu ozi site na web weebụ Ọ chọrọ iji usoro okwu mmemme nke asụsụ mmemme
Ọtụtụ weebụsaịtị dịka Twitter, Facebook, LinkedIn, wdg na-enye gị API ọha na eze ma ọ bụ nkeonwe nke a pụrụ ịkpọ site na iji koodu ọkọlọtọ iji weghachite data na usoro.
4. DOM Na - 20)
Rịba ama na ụfọdụ mmemme nwere ike weghachite ọdịnaya dị mma nke akwụkwọ edemede ndị ahịa na-emepụta. O kwere omume ịsaa ibe n'ime osisi DOM dabere na mmemme ị nwere ike iji weghachite akụkụ ụfọdụ nke ibe ndị a. )
Tupu ịmalite ịwacha weebụ na R, ịkwesịrị inwe ihe ọmụma dị mkpa na R. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido, e nwere ọtụtụ isi ihe ndị nwere ike inyere. Ọzọkwa, a chọrọ ka ị mara ihe HTML na CSS. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị amaghị ihe ọmụma nke ihe ọmụma HTML na CSS, ịnwere ike iji ngwà ngwanrọ dịka Họrọ Ngwa.
Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-enwupụta data na ebe IMDB maka 100 kachasị egwu nkiri wepụtara na oge nyere, ịkwesịrị ichota data ndị a site na saịtị: nkọwa, ọsọ ọsọ, ụdị, ọkwa, votes , ego na-akwụ ụgwọ, nduzi na nkedo. Ozugbo i weghaara data, ị nwere ike nyochaa ya n'ụzọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ngosi ngosi dị mma. Ugbu a ọ bụrụ na ị nwere echiche zuru oke banyere ihe nchịkọta data, ị nwere ike ime ka ụzọ gị gbaa gburugburu!